जापानको सबैभन्दा ठूलो तातो वसन्त रिसोर्ट बेप्पूसँग विभिन्न प्रकारका स्नानहरू छन्, पारम्परिक सांप्रदायिक स्नानदेखि विलासी विशाल बाहिरी स्नानसम्म। यस पृष्ठमा, विभिन्न नुहाउने दृश्यहरूको आनन्द लिनुहोस्! बेप्पू बेप्पूको तातो वसन्त स्नानहरू बप्पू तातो वसन्त स्नान बेप्पू तातो वसन्त स्नान बेप्पू तातो वसन्त स्नान बेप्पू तातो वसन्त स्नानहरू बेप्पू तातो वसन्त स्नान = शटरस्टक बेप्पू तातो वसन्त स्नान = शटरस्टक बेप्पू शहर रात्रि दृश्य = शटरस्टेभ नक्शा बप्पुको म सराहना गर्दछु। तपाईं अन्त पढ्न। कृपया अन्य फोटोहरू हेर्नुहोस्। मेरो बारे "बप्पुको बेस्ट" मा फर्कनुहोस् बोन कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (NIKKEI) को लागि वरिष्ठ संपादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
बप्पूमा सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटन स्थलहरू "हेल्स" हुन् (जिगोोकु = 地獄）। बप्पूमा, प्राचीन समयका ठूला प्राकृतिक तातो स्प्रि "हरूलाई "हेल्स" भनिन्छ किनभने तिनीहरूको दृश्य नर्क जस्तो छ। बप्पूमा विभिन्न प्रकारका तातो स्प्रि areहरू छन्। त्यसैले हेल्सको रंग बिभिन्न छ। यस पृष्ठमा ती नारकीय फोटोहरूको आनन्द लिनुहोस्! बेप्पू बप्पु शहर ल्यान्डस्केपका फोटोहरू: शिप्टरस्टक जापानी बगैचा उमी जिगोको (समुद्री नरक) बप्पूमा = शटरस्टॉक उमी जिगोोकु (समुद्री नरक) = शटरस्टॉक चिनोइक जिगोोकू (रगत पोखरी नरक) = बप्पुमा शटरस्टक यामाजीगोको बप्पुमा उमी जिगोको (बर्कू) मा शटरस्टॉक चिनोइक जिगोोकु बप्पूमा = शटरस्टक चिनोइक जिगोको बिपुको शूटरस्टोक चिनोइक जिओपोको पढ्नको लागि प्रशंसा गर्दछ। कृपया अन्य तस्विरहरू हेर्नुहोस्। "बेप्टो अफ बेप्पू" मा फर्कनुहोस् बोन कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (एनआईकेकेआई) का लागि वरिष्ठ सम्पादकको रूपमा काम गरिसकें र वर्तमानमा स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म सम्पादक- जापानी संस्कृति मा मीडिया को प्रमुख। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
जापानका अन्य पर्यटन स्थलहरू जस्तै बप्पूले पनि वसन्त, गर्मी, शरद र जाडोमा मौसमी परिवर्तनहरूको अनुभव गर्छन्। तातो वसन्त वरिपरिको दृश्य मौसमको परिवर्तन अनुसार सुन्दर परिवर्तन हुन्छ। यस पृष्ठमा, म चार सीजनहरूको थीमको साथ सुन्दर फोटोहरू प्रस्तुत गर्ने छु। बेप्पू बप्पु शहर ल्यान्डस्केप को वसन्त मा बप्पू परिदृश्य वसन्त मा बेप्पू परिदृश्य वसन्त मा बेप्पू परिदृश्य वसन्त Beतुमा बेप्पू परिदृश्य गर्मीमा बेप्पू परिदृश्य गर्मीमा बेप्पू परिदृश्य शरद Beतुमा बेप्पू परिदृश्य शरद Beतु मा बेप्पू परिदृश्य को बप्पू को नक्शा पढ्नको लागि म तपाईलाई कदर गर्छु समाप्त। कृपया अन्य फोटोहरू हेर्नुहोस्। मेरो बारे "बप्पुको बेस्ट" मा फर्कनुहोस् बोन कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (NIKKEI) को लागि वरिष्ठ संपादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
कप्पुको पूर्वी भागमा अवस्थित बेप्पू जापानको सबैभन्दा ठूलो तातो वसन्त रिसोर्ट हो। जब तपाईं बप्पू जानुहुन्छ, तपाईं पहिला तातो स्प्रि atहरूमा चकित हुनुहुनेछ जुन यहाँ र त्यहाँ वसन्त हुन्छ। जब तपाईं पहाडबाट बप्पूको शहर दृश्यमा हेर्नुहुन्छ, तपाईं यस पृष्ठमा देख्न सक्नुहुन्छ, स्टीम जताततै उदाउदै छ। तिनीहरू कुनै पनि हालतमा आगो हुदैनन्। रातमा, यी स्टीमहरू रोशनीका साथ सुन्दर देखिन्छन्। बेप्पूको नक्सा बप्पूको नक्शा अन्तमा पढेर तपाईलाई कदर गर्छु। कृपया अन्य फोटोहरू हेर्नुहोस्। मेरो बारे "बप्पुको बेस्ट" मा फर्कनुहोस् बोन कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (NIKKEI) को लागि वरिष्ठ संपादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
बेप्पू (別 府), ओइटा प्रान्त, जापानको सबैभन्दा ठूलो तातो वसन्त रिसोर्ट हो। यदि तपाईं पूर्ण रूपमा जापानी हट स्प्रि enjoyहरूको मजा लिन चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो यात्रामा बेप्पू थप्न सक्नुहुन्छ। बेप्पूमा धेरै ठूलो मात्रामा तातो पानी छ र त्यहाँ विभिन्न प्रकारका तातो स्प्रि .हरू छन्। ठूला सार्वजनिक स्नानहरू बाहेक, त्यहाँ अतिथि कोठामा निजी स्नानहरू र स्विमशूटको साथ विशाल आउटडोर स्नानहरू छन्। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई विस्तारमा बप्पूसँग परिचय गराउनेछु। बप्पुको फोटो रूपरेखा बेप्पूमा जताततै सानो बाहिरी स्नानहरू छन्। यी "अहियु (फुटबाथ)" हुन् जहाँ तपाई सजिलै आफ्नो खुट्टा नुहाउन सक्नुहुन्छ। बेप्पू जापानको सबैभन्दा ठूलो तातो वसन्त रिसोर्ट क्षेत्र हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको यलोस्टोन पछि बप्पुबाट स्प्रि hot्ग पानीको मात्रा विश्वको दोस्रो ठूलो हो। बेप्पूले १२.125.34..1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटे, जुन यलोस्टोनको १ / th० मात्र मात्र हो। जब तपाई बप्पू जानुहुन्छ, तपाई छक्क पर्नुहुनेछ कि कति तातो वसन्त पानी यहाँ पलाएको छ। बेप्पू लामो समयदेखि जापानको अग्रणी तातो वसन्त रिसोर्टको रूपमा परिचित छ। नुहाउनका लागि विभिन्न प्रकारका तातो स्प्रि .हरू प्रयोग गरिएको छ। यसबाहेक, अचम्मै र colored्गको तातो स्प्रि suchहरू जस्तै "उमी-जिगोको (समुद्री नरक)" र "चिनोइक-जिगोोकु (रगत पोखरी नरक)" ले मानिसहरूलाई स्पटको रूपमा आकर्षित गरेको छ। आज, बर्ष million० लाख भन्दा बढी पर्यटक बप्पु आउँछन्। बेप्पूमा यी पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्न त्यहाँ धेरै होटल र र्योकन छन्। बेप्पूलाई नजिकको युफुइनसँग तुलना गरिएको छ। युफुइन एक शान्त तातो वसन्त रिसोर्ट हो। यसको विपरित, बप्पू एक जीवन्त रिसोर्ट शहर हो ...
माथिको तस्वीर बेप्पू शहर, ओइटा प्रान्तको दृश्य हो। यो शहर आगोले जलेको छैन। किनभने तातो वसन्त पानी धेरै ठूलो छ, तपाईं स्टीमको साथ यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। बप्पु शहर नजिकै युफुइन छ जो प्रशस्त प्रकृतिको साथ एक स्पा रिसोर्ट हो। यो शहर विदेशी पर्यटकहरूमा पनि धेरै लोकप्रिय छ। युफिनको ओइटा ल्यान्डस्केपको रूपरेखा, जापान = एडोबस्टक ओइटा बप्पूको नक्शा म तपाईंलाई अन्तमा पढ्नको लागि प्रशंसा गर्दछु। "क्युशु क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ" मा फिर्ता जानुहोस् मेरो बारेमा बान कुरोसवा मैले लामो समयदेखि निहोन केजाई शिम्बुन (एनआईकेकेआई) को लागि वरिष्ठ संपादकको रूपमा काम गरें र हाल स्वतन्त्र वेब लेखकको रूपमा काम गर्दैछु। NIKKEI मा, म जापानी संस्कृति मा मिडिया को प्रमुख संपादक थियो। मलाई जापानको बारेमा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो चीजहरू दिनुहोस्। अधिक विवरणको लागि कृपया यस लेखलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।